သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်
Posted by Ma Ma on Oct 14, 2011 in Creative Writing, Think Different | 21 comments
သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ရေးမိရေးရာ လက်စမ်းစာပေ
သံပန်းလုပ်သားလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဆရာရဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ပိုင်ရှင်မရှိတုန်း အစီးသင် တက်စီးကြည့်ပါတယ်။ မစီးတတ်တော့ ဆိုင်ကယ်က လုပ်လက်စ သံပန်းတံခါးကို ဝင်တိုက်မိပြီး တံခါးပျက်သွားပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်လည်း နည်းနည်းထိသွားသလို လူလည်း ခြေထောက်ခိုက်မိပြီး သွေးထွက်သံယို ဖြစ်သွားတာပေ့ါ။
အဲဒီအချိန်မှာ အိမ်ရှင်က သူ့တံခါးပျက်သွားလို့ အလုပ်သမားကောင်လေးကို ဆူပူပြီး သူ့ဆရာကို အသစ်ပြန်လုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
သံပန်းဆရာကလည်း ပေါများသူမဟုတ်တာမို့ သူ့ဆိုင်ကယ်ထိသွားလို့ ထွက်မယ့်ငွေ၊ သံပန်းတံခါးကို ပြန်ပြင်ပေးရမှာမို့ ပစ္စည်းဖိုး၊ လက်ခ စသဖြင့် ကုန်ကျမှာတွေကို တွက်မိပြီး ဆတ်ဆတ်ဆော့ဆော့ လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်သမားကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းပါတော့တယ်။
အဲဒီ ဖြစ်ပုံပျက်ပုံအလုံးစုံကို မီဒီယာသမားတစ်ယောက်က အေးစက်မာကျောခက်ထန်သော နှလုံးသားတံခါး ပွင့်ထွက်လာတယ်လို့ စာစီပါတော့တယ်။
နောက်ဆုံးမှာ အိမ်ရှင်နဲ့ အလုပ်ရှင်ကို ထိခိုက်မိတဲ့ အလုပ်သမားလေးကို လူသားချင်းမစာနာဘူးဆိုပြီး စွပ်စွဲပုတ်ခတ်တဲ့စာတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဒီနေရာမှာ အလုပ်သမားအနေနဲ့လည်း သူတပါးပစ္စည်း (အလုပ်ရှင်ရဲ့ ဆိုင်ကယ်) ကို ပိုင်ရှင်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်၊ လုပ်ငန်းနဲ့လည်း မသက်ဆိုင်ပဲ အလွဲသုံးစားလုပ်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် တာဝန်ယူဖို့ လိုတယ်၊ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုရင်ကော……….
အချို့ကိစ္စတွေမှာ ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင် လက်ဖဝါး၊ သူ့ဘက်ကကြည့်ရင် လက်ဖမိုးဆိုသလိုမို့ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း သိချင်မိပါတယ်။
တော်ကြာ ကိုယ်ပါ မစာနာသူ တစ်ယောက်ရယ်ဆိုပြီး
ခေါင်းစဉ်တပ်ခံလာရမှာ စိုးလို့ 
မမရေ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အချို့သောသူများက မရှိသူဘက်က မှားမှားမှန်မှန်ဇွတ်ဘက်လိုက်တတ်ပါတယ်။
တစ်ချို့သောသူတွေက ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော်ဆိုတာ မသိတဲ့သူတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ပါ။
ဆင်းရဲချမ်းသာ ဆိုတာထက် ကိုယ့်နေရာကိုယ်နေတတ်ဘို့ လိုအပ်တယ်လို့ လဲထင်ပါတယ်။
အခုကိစ္စမှာ မှားတာကတော့ တပည့်ပါဘဲ၊
လင်းကနဲ ရှင်းကနဲ မြင်တတ်အောင်ပြောနိုင်တတ်လို့ အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူး ။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..နောက်တော့ မဖြစ်စေနဲ့ ..
(ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်..နောက်တော့ မဖြစ်စေနဲ့ ..)
အဓိကပြောချင်တာလည်း အဲဒါပါပဲ ပေါက်ဖော် ရေ။
ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးအပြစ်ကို စဉ်းစားရမယ်၊ တာဝန်ယူရမယ်။
တခါက ကားသမားတစ်ယောက် သူများကားကို ဝင်တိုက်မိတယ်။ မတိုက်ခင်က အကြမ်းပတမ်း မောင်းတယ်။ တိုက်မိပြီးတော့မှ သူ့မှာ စားစရာတောင် အနိုင်နိုင်ပါ။ ခုကားကလည်း သူအပိုင်မဟုတ်ပဲ ငှားမောင်းတာသာဖြစ်ပြီး မိန်းမနဲ့ သားသမီးတွေကလည်း သူ့လုပ်စာကို မှီခိုနေရတာမို့ မလျော်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး တောင်းပန်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ တိုက်ခံရတဲ့လူနဲ့ သိတဲ့လူက အဲဒီကားသမားနဲ့ တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေသူ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့မှ အဲဒီလူက ကားမောင်းကြမ်းပြီး မကြာခဏ ကားတိုက်မိကြောင်း၊ ကားတိုက်မိရင်လည်း မလျော်ရအောင် လိမ်ညာပြီး လျှောက်ပြောတတ်တယ်ဆိုတာ သိသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ခံရသူဘက်က ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲ ပြီးသွားရတယ်။
အိမ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ရင် သနားစရာအလုပ်သမားလေး ဆိုင်ကယ်စီးသင်ချင်ရှာလွန်းလို့ ဖြစ်ရလေဆိုပြီး (မရနိုင်လို့ရွှေစည်းခုံလှူပါသည်တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့) အလျော်မယူဘဲနေမလား၊
အကယ်၍ သံပန်းဆရာနေရာဆိုရင်ကော အိုချစ်လှစွာသောတပည့်လေး ဘာမှအားမငယ်နဲ့ ၊ဆရာ့ဆိုင်ကယ် မင်းတတ်တဲ့အချိန် ဘုံးဘုံးကျချင်ကျပါစေ စီးသာစီးပါ ၊သံပန်းလည်းမလုပ်ရတော့ရင်နေပါစေ၊ဖောက်သည်လည်းပျက်ပါစေ၊
အဲဒါပြောတာပေါ့…..။ လူ့စည်း ဘီလူးစည်းဆိုတာလေ…။ အနေမတတ်အထိုင်မတတ်တဲ့ တပြည့်ရဲ့ အမှားပါပဲ…။ တစ်ချို့က မှန်တာပြောရရင် မစာနာရာကျမယ်…။ စရိုက်ကို ဘယ်လောက် သင်ပေးပေး မဖျောက်နိုင်ကြဘူး…။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောတာလေး သတိရလို့ ပြောရဦးမယ်…။ စရိုက်ဆိုး ညာဉ်ဆိုးက ဖျောက်ရခက်တယ်တဲ့……။
ဆင်းရဲတာ သပ်သပ် မနေတတ်မထိုင်တတ်တာ သပ်သပ် ပါ…သူ မနေတတ်လို့ မဆိုင်တာ လုပ်မိလို့ သုတစ်ပါးနစ်နာရတာ ဘယ်ကောင်းမလဲနော်…အမှားမလုပ်ခင် ကတည်းက ကိုယ့်အနေအထား ကိုယ်သိသင့်တယ် ထင်ပါတယ်…
တခါတခါ ကြပြန်တော့လည်း မရှိတာထက် မသိတာခက်နေပြန်ရော
ယူအက်စ်မှာ ..စစ်ဒဇင်တွေက.. အချိန်ပိုင်း ဂျူရီအဖြစ်..လုပ်ရတယ်..။ ဥပဒေအရကို ရှိနေတာလို့ ထင်တာပဲ..။ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်.။
တယောက်ယောက်က ရှိတယ်ပြောဖူးတယ်..။ ပြန်အသက်သွင်းဖို့ကောင်းတယ်..။
ဆိုတော့.. ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ရင်.. ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အလေ့ကို သင်ပေးနေတာပေါ့..
ကျုပ်သိသလောက်တေ့ာ.. အပြစ်အားလုံးက. အလုပ်သမားလေးဆီပုံကျမှာပဲ..ဆိုင်ကယ်ခိုးသုံးတာတမှု..။ တိုက်မိတာတမှု..
အိမ်ရှင်က နေရင်းထိုင်ရင်း..သူ့ပယောဂမပါပဲ တခါးပျက်ရတာမို့.. သူ့မှာအလျှော် ပြန်ရလိုမှုရှိတာ..တရားပါတယ်..။
အလုပ်ရှင်မှာလည်း. သူ့ဆိုင်ကယ်ခိုးပြီးမောင်းခံရတာမို့.. ဒီမတော်တဆနဲ့.. ဘာမှမဆိုင်..။
အမှုအတိုင်း တရားစွဲရင်.. အလုပ်သမားကို.. ဒဏ်ကြေးချရမှာပဲ.. မပေးနိုင်ရင် ထောင်ထဲထည့်ပေါ့..ပေးနိုင်ရင်..ပေးနိုင်တဲ့ငွေ. မျှယူကြပေါ့..။
မတရား ဆူပူကြိမ်းမောင်းကြရင်တော့.. အလုပ်သမားက.. လူတန်းစားခွဲတယ်..။ နစ်နာတယ် ပြန်တရားစွဲလို့ရမယ်..။ ကြားထဲ..ချွန်တွန်းသမားတွေကိုလည်း.. တရားစွဲတဲ့အထဲ.. ထည့်လိုက်လို့ရသလို.. သက်သေလိုက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်.။
အဲဒီမှာ .. အလုပ်သမားကို.. ကိုယ်ထိလက်ေ၇ာက်ပါထားရင်..လုပ်ထားသူတွေ.. ပြန်လျှော်ကြပေါ့..။
.စစ်ဒဇင်တွေက.. အချိန်ပိုင်း ဂျူရီအဖြစ်..လုပ်တယ် . (ဒီမိုကရေစီရှိသောတိုးတက်သောနိုင်ငံမှာရှိတယ်)
အဲလိုဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်း ရှည် မှာ သဂျီးရေ. ……
…..(ဒီမိုကရေစီရှိသောတိုးတက်သောနိုင်ငံမှာ ဒါတွေ ထည့်စဉ်းစားတယ်) အာမခံလျှော်ကြေး… လေဘာအန်လော…ဟူးမန်းရိုက်…ရုဒ်တက်စ်… အမ်အိုတီ.. နေရှင်နယ်အင်ရှူးဝါးရန့်စ်…
third party fire and theft insurance က ဆိုင်ကယ်အုန်နာဖက်က,
labours and laws က အလုပ်သမားဖက်က
ံhuman right က အိမ်ရှင်ဖက်က ..က
ပြီးရင် ရှေ့နေ …က ….ကြားဝင်အုပ်…..
နောက်ဆုံးရှေ့ နေစားမှာဆိုတော့… ရှေ့ နေမပေးချင်ရင်.. တရားရုံးတက်ရမဲ့အချိန်..အလုပ်တွေမပျက်ချင်ရင်..
အပြန်အလှန်.. ဖေးဖေးမမနဲ့.. ဖြေရှင်းကြတာပဲ..
ဒီလိုနဲ့.. ကောင်းမွန်တဲ့.. စိတ်တွေ..မွေးမြူစေတာပဲလေ…..။
သဂျီးနဲ့ အဘဆွေတို့ရဲ့ အားဖြည့်ချက်တွေကြောင့် စဉ်းစားစရာ အချက်အလက်တွေ ပိုများလာရတယ်။
၁။ အလုပ်သမားဘက်က အလျှော်ပေးဖို့ နေနေသာသာ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတာမို့ အလုပ်ရှင်ကို ဆေးကုပေးစေလိုပါတယ်။
၂။ အိမ်ရှင်ကလည်း သူ့ရပိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမား ဘယ်သူက ပေးပေးပေ့ါ။
၃။ အနစ်နာဆုံးကတော့ အလုပ်ရှင်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုယ့်အလုပ်ပျက်စီးမှာကို စိုးရိမ်လို့ အိမ်ရှင်ကိုလည်း မလွန်ဆန်နိုင်၊ အလုပ်သမားဆီက အလျှော်မရနိုင်တဲ့အပြင် အလုပ်သမားကိုလည်း ဆေးကုပေးရဦးမယ်။ သူ့ပစ္စည်းလည်း ပျက်စီးရတယ်။ ဥပဒေကြောင်းအရလည်း ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အပြင် ဘေးတီးနေသူတွေကလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ အလုပ်သမားကိုဆူပူကြိမ်းမောင်းရုံအပြင် ဘာမှ မတတ်နိုင်။
(အဲဒီမှာ .. အလုပ်သမားကို.. ကိုယ်ထိလက်ေ၇ာက်ပါထားရင်..လုပ်ထားသူတွေ.. ပြန်လျှော်ကြပေါ့..။) ဆိုတာကိုလည်း သဘောကျတယ်။
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုအရောင်အစွဲမှ မထားပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် မျှမျှတတ ဆုံးဖြတ်ချက် ချစေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပစ္စည်းမဟုတ်ပဲ သူတပါးပစ္စည်းကို မသိအောင်ခိုးယူသုံးစွဲမိရင် ဖြစ်တက်တဲ့ သဘာဝ တွေပဲ……အိမ်ကမသိအောင် ကားခိုးပြီးမောင်း ကားလဲမောင်းတက်တယ် ကားကလဲကောင်းတယ် ကိုယ်ကတခါပဲ ခိုးပြီးမောင်သွား လမ်းမှာ ဒုက္ခ တွေ့ရော…သူငယ်ချင်းဆိုင်ကယ်ပါ ခိုးစီးလိုက်မယ်ကွာ ဆိုရင် ဖြစ်ပြီ ပြဿနာ…. ချဲလောကမှာလဲ ရှိသေးတယ် သူများက တကွတ်ထဲ ထိုးလိုက်တယ် ရောင်းတဲ့သူက ဒိုင်လုပ်တဲ့သူစီမတင်ပဲ ကြားကနေဖြတ်စားတာ အဲဒီတကွတ်ကနေ ထပေါက်ရော…ဖြစ်တက်တဲ့
ဒီပို့စ်ပါ အကြောင်းကတော့ အလုပ်သမားကလျှော်ပေါ့…. မရှိတော့ ကိုယ့်အလုပ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်ရှင်က ခဏစိုက်ပေး…….အိမ်ရှင်က ထိုက်သင့်တာလေးနဲ့ကျေနပ်… လျှော်ပေးတဲ့ငွေကိုတော့ အလုပ်ဆက်လုပ်ရင်းတဖြေးဖြေးဖဲ့ဆပ်
“ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ” ဖြေရှင်းနည်းလေးပေးတဲ့ တညင်သားရေ…..
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာလည်း အခက်အခဲကတော့ ရှိသေးတယ်။
အိမ်ရှင်ကို ထိုက်သင့်တာလေးနဲ့ကျေနပ်အောင် ပြောဆိုနိုင်ပြီ ထားတော့ …..
အလျှော်ပေးတဲ့ငွေကို အလုပ်ဆက်လုပ်ရင်း တဖြေးဖြေးဖဲ့ဆပ်ရမှာစိုးလို့ အလုပ်သမားက ကိုယ့်ဆီမှာ ဆက်မလုပ်တော့ရင် လျှော်ပေးလိုက်ရတဲ့ ငွေလည်း ပြန်မရနိုင်တဲ့အပြင် အလုပ်သမားတစ်ယောက်လည်း ဆုံးရှုံးရဦးမယ်။
အဲဒါကိုရော ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်မှာလဲ?????????
ဒီနေရာမှာတော့ ငွေအနဲအများပေါ်မှုတည်သွားပြီမမရေ..နဲရင်တော့ နုတ်ကတိလေးနဲ့ပေါ့ များရင်တော့ မိသားစု နဲ့လူကြီးသူမများခေါ်ပြီး ငွေချေးစာချုပ်လေးနဲ့ပေါ့ မနဲမများလဲဖြစ် စာချုပ်လဲမလုပ် အလုပ်သမားကလဲ လျှော်ရမှာဆိုးလို့ အလုပ်ထွက်သွားရင် လိုက်ရိုက်သတ်ပလိုက်….:P
အလုပ်သမားက မှားတာပါ .. သို့သော် တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိတာမို့ … အလုပ်ရှင်က တောင်းပန် လျှော်ကြေးစိုက်ပေးထားသင့်ပါတယ် … နောက်မှ အလုပ်သမား လစာထဲက ပြန်ဖြတ်ယူယုံပဲ ရှိပါတယ် … ။
ကောင်လေးကတော့ …သူ့ အပြစ်နဲ့ သူဆိုတော့ ကျေနပ်မှာပါ … ။
အလုပ်ရှင်ကလည်း … ခဏတော့ စိုက်ထားရပေမယ့် နောက်ပြန်ရမှာမို့ ကျေနပ်မှာပါ ။
အိမ်ရှင်ကလည်း မိမိတံခါး အကောင်းတိုင်း ပြန်ရမှာမို့ .. ကျေနပ်မှာပါ … ။ :D
အဲဒါ တကယ်လို့ ရန်ကုန်မှာသာဆိုရင်
တရားသူကြီး ဦးအောင်ကြူး ဒီအမှုကို ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။ မနက်ဖြန် အမှုနဲ့ဆိုင်သူတွေ အိမ်လာခဲ့ကြ။ ဒါပဲ။ ဟေ့နေအုံး.. မလာခင် မဒမ်ကြောင်ဆီမှာ ခွင့်ပြုချက်ကြိုယူ။ တော်ကြာနေ ငါ့အိမ်မှာ လာဆုံနေအုံးမယ်။ မနေ့ကတော့ မမဂျီးနဲ့ အီးဒုံးနှစ်ယောက် ဝါကျွတ်လာကန်တော့တာ သွားဆုံမိလို့ နောင်ဂျိန်ပလေးကြတာ ဧည့်ခန်းထဲက တီဗွီကြီးကွဲသွားတယ်။ လက်ဆောင်ရတာမှ တယောက်ဆီက တသိန်းဖိုး၊ ငါ့တီဗွီကြီးက ဆယ်သိန်းတန်တယ်။
သတင်းတွေလျောက်ဖွတဲ့ မီဒီယာသမား မမဆိုသူလည်း တရားရုံးမှာ စစ်ချက်ထွက်ဆိုရမယ်။ အလုပ်မပျက်ချင်ရင် အိမ်ကိုလာထား။ :neutral:
အသက်တစ်ရာ မနေရသော်လည်း (စိတ်ညစ်စရာ) အမှုတစ်ရာမက ကြုံ ဆိုတာ ဒါပဲလေ။
ဆိုင်ကယ်ယူမောင်းတဲ့ အလုပ်သမားကလေးက မှားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း နဲ့ အများ ကို တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ချမ်းသာအောင် မိမိဘက်က အနာခံရဲတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပဲလိုအပ်ပါတယ်။
မန်းတလေးမှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ရင်ယာဉ်ကြီး မှားမှား မှန်မှန် ယာဉ်ကြီးအမှားလို့ အရိုးစွဲနေတဲ့အတွေးအခေါ်ရှိတယ် ဘေးကလူတွေကယာဉ်ကြီးသမားကိုစပြီးအပြစ်ပြောတော့တာဘဲ
အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား လူတန်းစားခွဲခြားမြင် ခြင်းကင်းဝေးစေချင်ပါသည် အချင်းချင်းလေးစားပါ။ မိမိ၏ခံယူချက်နှင့်စိတ်ဓါတ်ကသာအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ် ( အလုပ်ကိုလေးစားသောprofessional တစ်ယောက်ဖြစ်ရင် အလုပ်ရှင်ကလည်းအလုပ်သမားကိုအလိုလိုလေးစားတန်ဘိုးထားမှာပါ။)